Tongits ZingPlay 1.17 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.17 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Tongits ZingPlay
Tongits ZingPlay ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Tongits ZingPlay ဖိလစ်ပိုင်မိုဘိုင်းပေါ်မှာကစားရန်အဘို့အအခမဲ့ကဒ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးစိတ်ကူးဂရပ်ဖစ်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအဆိုပါဂိမ်းကျိန်းသေသငျသညျထူးခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုတတ်၏။
Tongits ဖိလစ်ပိုင်လူကြိုက်အများဆုံးကဒ်ဂိမ်းကြောင်းဂိမ်းတစ်ခု 3-player ကို rummy အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်ကတ်များတွေကိုဖယ်ရှားဖို့သို့မဟုတ်ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာစုစုပေါင်းရမှတ်အနည်းဆုံးအရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်ရရှိသူကစားသမားဆုရှင်ဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါကစားသမားကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ရှိခြင်းအသေးဆုံးအချက်များအတွက်ထိတွေ့ Fight, ပြီးနောက်, Tongits ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းသင်တို့ကိုလည်းမီးမရှို့ပါသို့မဟုတ်အလယ်ပိုင်း stack ဗလာအခါများလွန်းအချက်များရှိခြင်းခံရရှောင်ရှားရန်ရှိသည်တဲ့အခါမဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
💰အခမဲ့ရွှေ - ထောက်ခံနေ့စဉ်အခမဲ့ရွှေနှင့်န့်အသတ်ပျော်စရာမွေ့လျော်
⚔ရန်ပွဲ - အခြားကစားသမားစိန်ခေါ်ဝံ့?
♥ Tongits - သင် Tongits ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရန်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာများနှင့်ကံလိုအပ်ပါလိမ့်မည်
အားလုံးအကောင်းကံနဲ့ချက်ချင်းအနိုင်ရရှိ - ♣ဖွင့်ထဲမှာထိတွေ့
💵 Pot ငွေ - ပိုပိုပြီးကိုရွှေရ2ကြိမ်အနိုင်ရ
🎌 NOW က PLAY - ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်ဒုတိယအတွင်းအစစ်အမှန်ကစားသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်
🃏 TABLE SELECT - သင့်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်းဖန်တီးကစားနည်းဆုံးဖြတ်နဲ့ join ဖို့အခြားကစားသမားများစောင့်ပါ။
♦ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ PLAY - အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ buddy နဲ့ Tongits ZingPlay Play ။ Facebook က, သို့မဟုတ် Google အကောင့်ကိုဇင်အားဖြင့်အလွယ်တကူ Login ။
🤩အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပြောင် - သငျကစားနေစဉ်အခြားကစားသမားရန်သင့်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြ။ ချတ်နှင့်ယခုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ!
အခုဖိလစ်ပိုင်မှာ👋 Tongits အမှတ် 1 အွန်လိုင်းဂိမ်း Download! 👋
Tongits ZingPlay ကစားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပင်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းထုတ်ကုန်အတူသင်တို့သည်ကြိုးစားကြသည်။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမှကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သင်ကစားပွဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမှတ်ချက်များကြိုဆိုပါတယ်နေကြသည်။
Tongits ZingPlay အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tongits ZingPlay အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tongits ZingPlay အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tongits ZingPlay အား အခ်က္ျပပါ
Tongits ZingPlay ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tongits ZingPlay အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.17
ထုတ်လုပ်သူ Studio ZingPlay
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://privacy.zingplay.com
လက်မှတ် SHA1: 8B:23:9E:7E:AB:36:9C:A8:25:9B:1D:53:AD:8B:52:A4:5D:58:EC:88
ထုတ်လုပ်သူ (CN): VNG
Tongits ZingPlay APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ